‘डोल्पा पुग्नै चार दिन लाग्छ, कसरी गर्ने महाधिवेशन ?’
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस जुम्ला​का सभापति अंगतकुमार बुढालाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
म अहिले भर्खरै क्रियाशील सदस्य विवादबारे काठमाडौंको अनशनबाट फर्किएर डोल्पा आइपुगेको छु । कांग्रेसको क्रियाशीलता विवादका कारण यतिबेला हामी सभापतिहरु धर्नामा छौं । अरु जिल्लाहरुको भन्दा मेरो जिल्ला अलिकति फरक छ । क्रियाशीलताको नाम प्रकाशन गरेर सच्याउने अवसर दिए पनि डोल्पामा राप्रपा र एमालेको सदस्य घुसाइएकोले त्यो मिल्नेवाला छैन । यसो गर्न नमिल्ने भनेर केन्द्रीय सदस्यले निर्णय नै गरिसकेका छन् । त्यो मापदण्ड तय गरेर हामीलाई सर्कुलर पनि पठाइएको छ । तर, हाम्रोमा राप्रपाले ७० सालमा २४१ मत ल्याएको थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा । ०७४ सालमा राप्रपाको उम्मेदवार नै थिएनन् । त्यस्तो खालको राप्रपाका पाँच सय जनालाई जबरजस्ती क्रियाशील दिन खोजिँदैछ । अर्को कुरा स्वस्फूर्त नेपाली कांग्रेस बन्छु भनेर आएकाहरुको नयाँ क्रियाशील रोक्ने काम गरिएको छ । यसरी हामीले चाहेको ढंगमा काम गर्न पाइरहेका छैनौं । हाम्रा समस्याको सम्बोधन नेतृत्वले गर्न चाहिरहेको छैन । स्वाभिमानी र निष्ठावान कांग्रेसीलाई सिध्याउन खोजिएको छ । हाम्रो सुझाव भने पनि जे भने पनि यही हो कि– यो सदस्यता नवीकरणको अधिकारी एकदमै निष्पक्ष ढंगबाट पार्टीमा त्याग गरेकाहरुलाई दिनुपर्याे।
अहिले पार्टीमा युवाहरु परिपक्व भइसकेका छन् भन्ने सोच्नु हुन्न । युवा पंक्तिले पनि आफ्नो क्षमता बुझेर अग्रसर हुने बेला हो यो । समयअनुसार कुरा बुझ्ने नेतृत्व अग्रसर हुँदा सबैले समर्थन पनि गर्छन् । नेपाली कांग्रेसको बीपीदेखि गणेशमानसम्मका इतिहासलाई जोगाउन सक्ने नेतृत्व हामीले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा आडभरोसाको केन्द्र युवाहरु नै हुन् । अहिले मुलुकले निकास खोजिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस विकल्प र चुनौतीका बीच सरकारमा पुगेको छ । यो चुनौती र आइपर्न सक्ने समस्यालाई हल गर्न सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ ।
परिवारवादको समस्याबारे कहिलेकाहीँ कुरा उठ्छ । राजनीतिमा लागेको परिवारमा पुस्तान्तरण हुनु अनौठो कुरा होइन । यो जताततै र हरेक दलमा देखिएकै कुरा हो । तर, नेतृत्व लिन सक्ने र स्वतःस्फूर्त ढंगमा पार्टीमा लागेको मान्छेलाई हामीले नेतृत्व दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु हुन्न । परिवारकै सदस्य भए पनि पार्टीलाई अघि बढाउन सक्छ भने उसको क्षमतालाई मूल्याकंन गर्नुपर्छ । नेतृत्व गर्नै नसक्ने, पार्टीमा समय नदिने र कामै नगर्ने व्यक्तिलाई भने परिवारको योगदानको नाममा जिम्मेवारी दिनु हुँदैन ।
आउँदो वडा अधिवेशनका लागि पनि एकदमै जोखिम बढेको छ । डोल्पाजस्तो दुर्गम जिल्लामा अहिले अधिवेशनका लागि आवश्यक साधन र समयसमेत छैन । ११ गते भइसक्यो, हामी अघि बढ्नै सकिरहेका छैनौं । कतिपय क्रियाशील सदस्यहरु काठमाडौंमै छन् । काठमाडौंबाट गएका प्रतिनिधिहरुलाई डोल्पा पुग्नमात्रै चार दिन लाग्छ । त्यहाँ लेकमा जाँदा झनै समस्या छ । चुनावका लागि प्रशस्त म्यानपावर पनि हामीसँग छैन । नेतृत्वले यो क्रियाशीलबारे जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसक्दा अप्ठेरो आइपरेको हो । त्यसबारे नेतृत्वले नै सोच्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्था र यस्तै व्यवस्थापनबाट हामी महाधिवेशन गर्न सक्दैनौं । हामी त महाधिवेशन बहिष्कार नै पनि गर्न सक्छौं ।
पार्टीलाई वैधानिक बनाउने कुरामा म भन्दा बढी पार्टीका नेताहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । मैले संविधान राम्ररी हेरेको पनि छैन, भदौ २३ गते समयसीमा सकिने भनिएको छ । वडा अधिवेशन सुरु गरेपछि कतिको कानुनी मान्यता मिल्छ, म त्यो जान्दिनँ । बरु क्रियाशीलबारे जुन अनियमितता छ त्यसलाई नेतृत्वले रोक्नुपर्छ । व्यापक गुनासो अनियमितताबारे आइरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेतृत्वले सोच्दा निकै राम्रो होला । यति गर्न सक्दा पार्टी एकतावद्ध भएर अघि बढ्छ । नेतृत्वले महसुस गर्नपर्यो राम्रो तरिकाले अघि बढाउन कसरी सकिन्छ भनेर । धाँधली गर्ने, पेलेर जाने अनि अर्को पक्षले त्यसको प्रतिकार नै नगर्ने भयो भने त कांग्रेस सकिन्छ । त्यसकारण कांग्रेसलाई चुनौती र अवसर दुवै छ । सभापतिका लागि जति पनि सम्भावित अनुहारहरु छन्, समकक्षी वा सहकर्मीलाई चित्त बुझाउने गरी अघि जो बढ्न सक्छ– उसैले जित्ने हो ।
प्रकाशित मिति : भदौ ११, २०७८ शुक्रबार १७:२५:६, अन्तिम अपडेट : भदौ ११, २०७८ शुक्रबार १७:३४:२६